Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny fizahantany dia saika nanakorontana ny velaran'ny potika misy azy
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Jamaika • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Na dia tamin'ny fahombiazana lehibe niainan'ny fizahan-tany tao Jamaika aza talohan'ny valan'aretina COVID-19, ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett dia mino fa izy ireo dia nanakorontana ny velaran-pototra nananan'ity indostria ity.
Misy ny fahafaha-manao amin'ity krizy coronavirus COVID-19 ity.
Na eo aza ny fiatraikany mahatsiravina ateraky ny areti-mandringana amin'ny toekarem-pizahantany manerantany, satria ny drafitra natambatra ary napetraka mba hanarenana, izao no fotoana mety indrindra handinihana indray ilay indostria.
Fotoana iray ahafahana mamorona vokatra fizahan-tany izay azo antoka, tafiditra, maharitra ary maharitra.
Ny minisitra Bartlett dia niresaka tamin'ny fivorian'ny fikambanan'ny Caribbean Alternative Investment Association (CARAIA) natao tao amin'ny Hotely AC avy amin'i Marriott tao New Kingston, Jamaika, androany 29 Jolay 2021. Vakio na henoy - izay nolazainy.
Ny fizahan-tany dia iray amin'ny indostria lehibe indrindra sy mitombo haingana indrindra eto an-tany, mitarika fampandrosoana ara-tsosialy sy toekarena, fitomboan'ny fampiasam-bola, famoronana asa ary fampiroboroboana fotodrafitrasa.
Ny isa mialoha ny areti-mandringana dia milaza ny tantara. Tamin'ny taona 2019, ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany dia mitentina 10.4% amin'ny harin-karena faobe ary nanohana ny fiveloman'ny olona 334 tapitrisa (10.6% amin'ny asa rehetra). Mandritra izany fotoana izany, ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika iraisam-pirenena dia mitentina 1.7 tapitrisa tapitrisa dolara amerikana.
Tamin'ny faritra, ny toeran'i Karaiba dia nahazo tombanana ho 32.0 tapitrisa ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena, izay nanolotra vola mitentina US $ 59 miliara dolara amerikana tamin'ny harinkarena faobe, 35.7 tapitrisa dolara amerikana lanin'ny mpitsidika, ary nanohana asa 2.8 tapitrisa (15.2% amin'ny asa feno).
Raha eo an-toerana, ny taona 2019 dia taona nahavaky firaketana ho an'ny fahatongavan'ireo fizahan-tany sy karama. Nandray ireo mpitsidika 4.2 tapitrisa izahay, nahazo 3.7 miliara dolara amerikana ity, nanome 9.8% ho an'ny harin-karena faobe 17.0% ny firenena, nitontongana 170,000% an'ny Foreign Direct Investments (FDI) ary namokatra asa mivantana 100,000 nefa nisy fiantraikany XNUMX XNUMX tsy mivantana.
Talohan'ny krizy, ny fizahan-tany koa dia nitondra 15% ny fanamboarana, 10% ny banky sy ny vola, ny 20% ny famokarana ary ny 21% ny kojakoja ary koa ny fambolena sy ny jono. Amin'ny ankapobeny, ny sehatry ny fizahantany dia nitombo 36% tao anatin'ny 30 taona lasa raha oharina amin'ny fitomboan'ny harinkarena 10%.
Rehefa ampianao fa any Karaiba no misy an'i Jamaika, faritra iankinan'ny fizahan-tany indrindra eto an-tany, dia azonao izany ny maha-zava-dehibe ny fizahantany any Jamaikafanarenana ara-toekarena lehibe kokoa aorian'ny areti-mandringana.
Ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany dia manolotra iray amin'ireo fotoana tsara indrindra hanarenana an'i Jamaika sy hanamafisany ny harinkarenany. Noho izany, faly aho fa nasaina hiresaka amin'ny solontenan'ny Fikambanan'ny Mpampiasa Karaiba Alternative Karaiba (CARAIA) anio mba hahafahantsika mijery ireo fotoana mety hampiasam-bola amin'ny fizahan-tany izay hampirisihana ny fitomboan'ny indostria izay mandray anjara betsaka amin'ny fiadanam-bahoaka sy ny toe-karena ara-toekarena ho an'ny olona. .